Khabar Kantipur » पैदलयात्रीको मृत्यु ,प्रहरी चाैकी अगाडी नै दुर्घटना हुदाँ पनि प्रहरीले सूइ काेसम्म पाएन ।CC Tv मा जे देखियो…!
पैदलयात्रीको मृत्यु ,प्रहरी चाैकी अगाडी नै दुर्घटना हुदाँ पनि प्रहरीले सूइ काेसम्म पाएन ।CC Tv मा जे देखियो…!
धरान । अस्थायी प्रहरी चौकी बरगाछीको कार्यालय अगाडी मोटरसाइकले ठक्कर दिदा पैदलयात्रीको मृत्यु भएको छ । सोमबार साँझ ०८ः३० बजेको समयमा दक्षिण तर्फबाट आउदै गरेको मोटरसाइकलले ठक्कर दिदा धरान–१५ मा बस्ने राजु चाम्लिङ राईको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
ज्याला मजदुरी गरेर डेरा तर्फ फर्कदै गर्दा अरुण पेट्रोल पम्प मुनी अस्थायी प्रहरी चौकी बरगाछी अगाडी राईलाई मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको थियो ।
प्रहरी चाैकी अगाडी नै दुर्घटना हुदाँ पनि प्रहरीले सूइकाेसम्म पाएन । मोटरसाइकलको ठक्करबाट गम्भिर घाइते भएका उनलाई उपचारकोलागी विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्याए पनि उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारकोलागी बिराटनगर लगिएको थियो ।
उनको शव अहिले विपि प्रतिष्ठान धरानको शवगृहमा राखिएको छ । ठक्कर दिने मोटरसाइकलको अहिलेसम्म पहिचान हुन सकेको छैन । मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको भिडियो सिसि क्यामेरामा कैद भएको छ ।
ठक्कर दिएर भागेका मोटरसाइकल चालकको अहिलेसम्म पहिचान खुल्न सकेको छैन । इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डिएसपी ज्ञानेन्द्र बस्नेतका अनुसार मोटरसाइकलको खोजी कार्य भइरहेको छ ।
उदयपुर गाइघाट घर भएका उनी ज्याला मजदुरी गर्दै धरान–१५ मा डेरा गरेर बस्दै आएका थिए । उनको परिवारमा श्रीमती, एक छोरी र दुई छोरा रहेका छन् ।
ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएका राईको निधन भएपछि परिवार बिचल्लीमा परेको छ । मृतक राईका मामा विश्व राईका अनुसार ज्याला मजदुरी गरेर छोराछोरी लालान पालन गर्दै आएका घरमूलीको निधन भएकोले परिवारको चुल्हो नबल्ने स्थिति आएको छ ।
दु र्घटना गराउने मोटरसाइकल चालकको खोजी गरिदिन प्रहरी, प्रशासन तथा स्थानीबासीलाई विश्व राईले अपिल गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो –‘परिवार नै बिचल्लीमा परेको छ, सहयोग गर्ने कोही छैन, न्याय दिलाइदिने कोही छैन, सरकारले क्षतिपूर्ती दिलाइदियोस्, न्याय दिलाइदियोस् ।’-औजारन्युजबाट।